Beesha caalamka oo war ka soo saartay shirkii Fashilmay iyo qorshaha xiga
April 8, 2021 Xuseen 24
Ini Xarmaajo far waawayn ayaa wax loogu sheegay haduu fahmiwaayana qoortaa la qabanayaa dalkan been iyo barabuganto raqiis ah laguma maaweelin karo. Ini Xarmaajo waa ximaar qarmuun oo dhuuso iyo qaylo badan, waa diinlaawe damiin ah oo anshaxa iyo akhlaaqada suuban ka aradan. Maanta ini Xarmaajo waa naf lacaari albaab kastaana wuu kasoo xirmay isagoo fashil foolxun ah lagana aamin baxay. Waxaan mahad balaadhan u celinayaa Alle ka sakow madaxda Puntland Iyo Jubaland oo u quus gooyay handcup ka dhimirka la ee shaqsiyada xun leh.
Shariifo Dhuxulow says:
Waa nin waalan oo Abiy Ahmed iyo Afwerki been u sheegeen. Farmaajo waa jinni cambar arkay.
Waa maxay aflagaadadu?!
Waxa aan idin xasuusin lahaa in bishani ay tahay SHACBAAN; waa bil barakaysan. Marka, dadka caytamayoow haddii aydaan maandooriye isticmaalin ka waantooba aflagaadada. Waxa kale oo aan qolada mareegtan leh u sheegi lahaa, in ay ka saaraan aflagaadada lagu qoro mareegtooda haddii kale waxa ay noqonaysaa in aad raalli katihiin aflagaadada, markaa isku mid baad tihiin ee la socda.
Haddaan mawduuca u soo noqdo, marka hore beesha caalamku waa ku mahadsanyihiin qoraalkoora. Marka xiga waxaa la rabaa in hoggaanka villadu uu go’aan qaato. Looma baahna inta GIDIR laga soo dhergo in DHUUSO meesha lala yimaaddo. Waxaa marka looga fadhiyaa hoggaanka villada, ee ay hoostagaan maamullada Garoowe illaa Kismaanyo, oo ah KOONFURTA jamhuuriyaddii Soomaaliya, in ay qaataan 3 go’aan ee soo socda midkood:
1. In ay baarlamaanka arrinka ku celiyaan iyaga oo QEEXAYA sababaha fashiliyey heshiiskii baarlamaanku ansixiyeen ee 17 September ay dhinacyadu gaareen;
2. In ay miiska wadahadalka ku noqdaan, iyaga oo oggolaanaya shuruudaha uu garabka kale wato iyo
3. In BEESHA LIXAAD ay dawladnimada iyo arrinkaba ku wareejiyaan.
Saddexdaas qodob waa sida aan anigu u arko xalalka ismariwaaga hadda taagan, laakiin aan xal u ahayn mustaqbalka dawladnimada jamhuuriyadda Soomaaliya ee la iga saaray. Sidaa daradeed, looma baahna shaashado danbe oo la soo hor istaago iyo DHUUSO danbe oo la isla soo hor fadhiisto inya canbuulo laga soo dhergo. YAA XAL KALE HAYA?
Beesha Caalamka ayaa dalbatay in si deg deg ah la isugu soo laabto si loo sii wado wahadalada ku saabsan shirka Arrimaha doorashooyinka !!!!
-Maxaa qabsadey Ismaqiiqe farmaajo? Maxaase horyaal? Wax uusan aheyn ayuu is moodey, car diid haddii nin tahey?
-Kuwii lo’da ahaa maxey sameyn?
– Maxaa la haboon kuwii shaley MASH XARADEY?
– in ka yar 24 saac ayaa lagu aamusiyey….. nin waalan ayaa rartey .
ALLAH MAXAA CAY KA YEERAAYA DABADHILIFIINTII. BUUFISBAA KU DHACAY.
Kkkkk warkaan wuxuu ku socdaa cidii diidanayd heshiiskii 17 septemper hadaba labo kuu darran mid dooro ayaa haysta reer bur burin qaran kkkk hadii lagu xeshiin wayaa doorasho 17 septemper wadanka dowlad ayuu leeyahay wuuna sii jiri dowladiisa, cid orankartaa somaliyey kala taga majiro owrtaan way kacday beesha caalamkana laguu sheegaaya waa sidii midowga musharaxiinta waa kala dano dowladaan farmaajo WA DAMADA danta wadanka kala shaqeyn way soo dhaweyn cidii ka hor timaadaa waxaa ku dhici waxii kudhacay MADAXII QARAMADA MIDOOBAY HAYSOM IYO EMARITE WELIBA KENYA KKKKKKKK EE SOOMALIYA WAXAY HEYSATAA HOGAAMIYE ADAG KALA GADAYNA BEESHA CAALAMKII WAXUU FAHAN SANYAHAY WADAMADA KU CADOWGA IYO KU WAXTARKA U LEH . HADABA YAAN MAANGAABTA WAQTIGA ISAGA DHUMIN DOORASHO AAN MADAXWEYNE FARMAAJO RAALI UUSAN KA AHEYN KADHI MAYSO WAAYO WAA MADAXA USAREEYA EE SOMALIA.
KK, Halkan waxaa ka muuqda dadka qaar iney u hadlayaan sidii habrihii maxamuud salabeen xaare xukun jecel walee soomali fahantey DUF kubaxa. WAR SOOMALIYA waa wadan madaxbanan beesha caalamka xad bey leedahay. Caqli xumadooda maxamuud salabeen xaare xukun jecel waxeey rabaan iney dhahaan wadanku dowlad malaha, waxeey rabaan farmaajo inuu saxiixo inuu ka tanasuley madaxweyne inuu yahay waana caqli dameered. Reer puntland waa dad sharaf leh kooxdan burcad siyaasededka ee maxamuud salabeen xaare xukun jecel majeerten weyne waxeey ka yihiin 34% DADKA difaaca Puntland waa majeertenka kale iyo daroodka kale ee dega Puntland maxamuud salabeen xaare waligood wax ma difaacin mana laha dadnimo ay wax ku difaacan markii xaqiiqda laga hadlo. Teedkale dube waa shaqaaale dowladed waxuuna ku hadlaa afka dowlada iskama hadli karo
Tu Dameer laga roone Cali,
Maxamuud Saleebaan waxay u taliyaan 1/3 of somalia wayna diideen in laangaab homless adigoo kale ahi dhuuso lasoo raadsado ee maxaa talo ah kkkkk Maxamuud saleebaan meel kasta ood tagtid ayagaa wax ah : USA ayagaa Soomaali Congress ka ugu jira, Canada ayagaa wasiirka Soomaali ku matalaya ku fadhiya, Maxkamadda adduunka ayagaa kiiskii badda Soomaaliyeed soo dhicinaya. Ilaahay baa u doortay inay madaxa kaaga kaajaan oo aad adiguna inan gumeed ahaatid.
Marka Bax sakiin liq dayuusyohow laangaabka ahi. Noo sheeg laangaab kaad ka dhalatay waxay cidna kusoo kordhiyeen
Dad cay waa dulloobaa; duunyo cay waa deegaa (xoola beelaa ); dal cayna waa dalaabaa(meel xun buu ka dhacaa) waa waxa Soomaali haysta.
Yaa MAXAMUUD SALEEBAAN wax ka sheegi kara. MAXAMUUD SALEEBAAN waa:
+ INDHAHA MAJEERTEEN, MAJEERTEEN yaa waayee, Waa MAXAMUUD SALEEBAAN.
+ INDHAHA HARTI DAAROOD
+ INDHAHA KABLALAX DAAROOD
+ INDHAHA DAAROOD WEYNI. ALLAAH weyni ah.
FARMAAJO isaga ka horyimid: MAJEERTEEN, OGAADEEN, IYO HIRAAB HAWIYE.
FARMAAJO isagaa soo aruursaday laangaab. Isagaa soo aruursaday midgo, eelaay, iyo jareer weyni, laangaab HAWIYE: gaaljecel, janjeeli, baadicadde..mooriyaan IIDOOR haddi meel ha geeyeen.
FARMAAJOOOW, adeerkaa wadadiisa lee haaystaa. War caqligo ha shaqeeeyo. War mooriyaantaase meel ku geeyn meeyso.
Orod muufadadi barawanka dubo waxaa aad halkan ku soo qortey waxba kama jiraan waa beenta uu maxamuud salabeen xaare waligood isugu sheekeyn jireen.
1) Maxamuud saleeban xaare XUKUN jecel umma aha dhindho majeerten weyne waxa deeganada majeerten difaaco waa majeertenka kale.
2) maxamuud salabeen xaare indho umma aha harti kkkk lama qabsadeen sool iyo sanaag.
3) maxamuud salabeen xaare xukun jecel indho umma aha kablalax iyo ogaaden hadey indho u yihiin meysan u dhiibeen Ethiopian dabarux iyo naq naqda meelkale la aad.
4) maxamuud salabeen xaare xukun jecel DAROOD WEYNE waxaba kama aha waa BISAD ku dhex jirta LIBAAXYO.
MAANTA maxamuud salabeen xaare xukun jecel ma hayaan majeerten weyne, ma hayaan harti ma hayaan daroodka kale side lelkase waayo waxeey garteen maxamuud salabeen xaare xukun jecel iney yihiin burcad siyaaseded isna difaaci karin. Hawiye 80% wey ka soo horjeedan maxamuud salabeen xaare xukun jecel waxaana daliil u ah sidey farmaajo ula dafteen.
CALI MAXAA KUU GEEYAY DUMARKA MAXAMUUD SALEEBAAN MA WAXAA TAHAY FURUUKHDII DHASHAY XILIGII KACAANKA?
HILLAAC 24 SAAC WAXAA QOLKAAN LAGU CAAYAA DENI IYO AXMED MADOOBE WALIGAA KAAMA MAQAL ADIGOO CAAYDA DIIDAN MARKA CADALADA HALA TAGIN.
CBB CAYAYAANKA BARAHA BULSHADA ILAAH AMARKI WAXAA ISKU ARUURSADAY DADKII SOOMAALI UGU AKHLAAQDA XUMAA.
WALAAHI FARMAAJO WAXAA I NAC SIIYAY CAYAYAANKA BARAHA BULSHADA CBB.
@@@ BARAAWANI KING=WIIL WAAMO!!!!
Soomaaliya maanta ma joogto Maqaam uu qof Soomaali ahi ku faano in uu yiraahdo, reerka yaga ayaa Baryo weyn iyo Annaga ayaa Cirka iyo Dhulka kala haayno. Ee waxaay joogtaa meel Dadka Adduunka ku nool aay ka u arkaan, in aay caay tahay in qofka lagu yiraahdo ma Soomaali baad tahay?!!!!!!
Waxaan fadhiyey meel Dunidan kamid ah oo Naag inta uu Qof Aadame ahi fool xunyahay fool xun oo African ah lagu weeydiiyey ma Soomaali baad tahay?
Taas oo si aay caro ka muuqato sida in la caayay u tiri, “no no, I’m not Somali!
Arrintaa oo anigii meesha fadhiyey runtii wax la yaab leh igu noqotay! Oo kaaga darane, aanba meeshuba labada yada dad Modoow ku fadhinay!
Markii aan weeydiiyey maxaad si caro leh ugu jawaabtay, markii laguugu yiri ma Soomaali baad tahay?!
Waxaay iigu jawaabtay. Soomaalida dad liita ayaa looga arkaa Dunida, in la igu sheegana ma doonayo!
Waxaa kale oon daawaday, Su’aal uu nin Caddaan ah oo youtuber ah weeydiinayo Shacabka TANZANIA, su’aashaas oo ahayd. Waa dalkee dalka aad Dunida ugu necebtihiin!
Dadkii reer TANZANIA 80% waxaay ku jawaabeen Somalia!
Markii uu Weriyaha ku celiyey maxaad ku nacdeen?!
Waxaay ku jawaabeen. Soomaalida waa dad aanan qaxar, Dagaal iyo shiddo mooyee wax kale oo Faa’iido ah aanan lahayn!!
Midda Maxamuud Saleebaan ayaa Indho iyo dhego Daarood u ah! Inta aan ka warqabo, Nimankaa Soomaaliya xukun la sheegi karo waxaay xukumeen 2 sano oo kala ahaa, 68dii iyo 69kii.
Marka Sooyaalka Soomaaliya dib loo fiiriyo, 2daa sano waxaay ahaayeen, 2dii sano ee ugu Musuqa badanaa 30kii sano ee aay Soomaaliya Dowlad la sheegi karo ka jirtay!
Miyaadse arkin C/weli Gaas oo Siyaad Barre ugu duceeynaya, jidka Garoowe iyo Boosaaso iyo Dekedda uu dhisay ee Haddeerna wax duugmaya iyo wax burburay noqday?
Aawayse wax qabadka Nimanka aad sidan u buunbuunisay, mid hore iyo mid dambaba?! Maayse kuwaa loo dhisay dayac tirtaan ugu yaraan, haddii aay yihiin dadkan aad ku sheegtay ee Cirka iyo Dhulka kala haya?!
Naag baad tahay maangab ah sidey ku dhacdey maxamuud salabeen xaare inuu ka taiiyo 1/3 SOMALIA waa waxa aad soonalida ku qaribteen been cuuuc iyo caaac. Xaqiiqda marka laga hadlo maamulka puntland waxeey ka taliyaan laba gobol iyo bar, waqooyiga mudug, nugaal iyo barri let us see facts waqooyiga mudug waxaa la dago lelkase, majeertenka kale, dir,owrtable. let check gobolka barri markii degmooyinka barri la tirayo waxaa ku badan majeertanka kale iyo dashiishle, nugaal unnbey leeyihiin. BAL inaad xooolo tahay QOF dowlad shisheeye u shaqeeya soomalida umma tirsana waana sababta hada xalane ugu jiraan maxamuud salabeen xaare.
Adigu miyaadan Xaarin oo aaysan futo kugu oollin?!
Si akhlaaq leh aragtidaada u dhiibo duf ku baxe!
M. Saleebaan Shaqsi aad la caaytameeyso ma ahan, ee waa Qabiil Culimo iyo Caamaba leh!
Meeshan waxaa ku batay, ciyaal Fowdo ku kor ah oo aanan waxba xeerin!
Dal burburay dhibka ugu yar ee ka dhalan kara waa intan!!!!!
Asc jumca mubaarak waa qalad in qowmiyad iyo qabiil wax laga sheego ee figradihiina ka dhiibta page ka aad dhaalacadeen .
Xaalku xageebu marayaa dube eray bixintii (JID IYO JIHA-DIID) reer
Maxamuud saleebaan & Binti girl, cay ma laha. waxaan ka hadlayanaa doodu tahay.. Kaligii taliye Xaar maajo . maxaan ka yeelnaa ? arinkaa ayaa u baahan in laga jawaabo.
Maxamuud saleebeen . Ciise riyoole & ciisa maxamuud haadaad maanta oo dhan caydo ku mee meeraysato , meel gaadhi maysid,, Xaar Maajo & Villa wardhiihlay waxa ka socda ka hadla , Ciyaaal.
Dube , wax khalad ah oo uu sameeyay ma jidho. Xaarmaajo ayaa ku yidhi dadka beeen u sheg.
Dube.. Dadka Been u sheeg Xaarmaajo ha ka hor iman , shaqaadada wado.
markaad qabiil caydo , waan in aad qabiilkaaka sheegto si isgana loo caayo,, hadii kale qabiiil ma lihid ayay noqon.
Mxamuud saleebaan, ma lacag ayaad , deyn ayaad ku leedahay… ha nagu daalin warkooda.
Xaalku waxa uu marahayaa.. JID & JIHO ma laha Zoomalia… AMISOM ha ilaaliso waligeeed